Listen to 2nd episode of Lolita.
केशरी हुमागाईव्दारा अनुवादित भ्लादिमिर नावोकोभ को विवादास्पद र बहुचर्चित उपन्यास “लोलिता” को दोश्रो अंक लिएर आजको रेडियोवाचनमा उपस्थित भएका छौँ । २० औँ शताब्दि का प्रख्यात कथाकार तथा उपन्यासकार भ्लिदिमिर नावोकोभ ले लोलिता उपन्यास मा “हम्बर्ट को आफ्नी झट्केली छोरी लोलिता प्रतिको यौनाभावको खुलासा” गरेकाछन् ।
आजको रेडियोवाचन को बसाइमा संसारभर करोडौँ प्रति बिक्रि भइसकेको उपन्यास “लोलिता” को यो दोश्रो अंक हाम्रा लोकप्रिय रेडियोकर्मी अच्युत घिमिरे वाचन गर्दैहुनुहुन्छ, २५ औँ पृष्ठदेखि ।
लोलिता हिँड्दा हिँड्दै आएर रोकिइ … श्रीमती हेज… प्रोफेसर हम्बर्ट… प्रोफेसर हम्बर्ट लोलितालाई यौनको आँखाले हेर्दैछन्… । अनौठो सम्बन्ध र एकदमै विवादास्पद उपन्यास लोलिता, यस्तै यस्तै प्रसंगहरु सँग अघि बढ्दै जान्छ । अच्युत घिमिरे को वाचनमा सरल र सहज लागेको “लोलिता” को कथा मैले भनिरहनु जरुरी लाग्दैन । यहाँहरु ले सुनेर नै मुल्यांकन गर्नसक्नुहुन्छ । जब जब, श्रीमती हेज घरबाहिर हुन्थिन तब प्रोफेसर लोलितालाई चलाउने र जिस्क्याउने नियत ले हरदम लोलिताकै वरिपरि घुमिरहेका हुन्थे । यहाँ विल्कुल यौनिक आँखा घुमिरहेकाछन्, अनि ती आँखाहरु लोलिताको अगाडि पछाडि हेरिरहेकाछन् । उपन्यास, लोलिताको वर्णन गर्दै अगाडि बढेको छ अनि सुनाउँदैछन्, प्रोफेसर हम्बर्ट ! लेखक, आफू नै हम्बर्ट बनेकाछन्, अनि यी सबै कुराहरु हम्बर्ट अरुलाई सुनाइरहेकाछन् ।
यहाँहरुलाई रेडियोवाचन को श्रृंखलाहरु कस्तो लाग्दैछ, हामी ताली गाली अनि सल्लाह र सुझाव को सदैव अपेक्षा गर्दछौँ । यहाँहरुले प्रतिक्रियाहरु सिधै अच्युत घिमिरेलाई [email protected] मा ईमेल गरेर पठाउन पनि सक्नुहुनेछ । रेडियोवाचन को यो बसाइमा ‘लोलिता’ को अंकहरु उपलब्ध गराइदिनुहुने, रेडियोकर्मी अच्युत घिमिरेलाई हार्दिक धन्यवाद ! साथै, प्राविधिक साथि उज्वल अधिकारी र कार्यक्रममा प्रयुक्त गित संगितका सम्पुर्ण स्रष्टाहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद !
नोट: यो यौन उपन्यास हो, जसमा समाजले नपचाउने प्रोफेसर र झट्केली छोरी लोलिता बिचको सम्बन्ध को वर्णन गरिएको छ । केही उमेर समूह वा केही व्यक्ति विशेषलाई, यो उपन्यास अनुपयुक्त लाग्न सक्छ, यसमा प्रयुक्त शब्दहरु र घटनाको वर्णनको क्रम मन नपर्नसक्छ । यदि कसैलाई अपाच्य लागेमा, हामी माफि चाहन्छौँ ।
Unknown May 9, 2009 at 10:21 AM
सेखर May 9, 2009 at 2:46 PM
मैले सुन्न नै पाएको छैन, परिक्षाको चापले, अली धेरै दिनसम्म राख्नु ल आकारजी यो दोस्रो पाठ ।
Eternal May 9, 2009 at 7:04 PM
Was so much desperate to hear it...
सेखर November 12, 2010 at 4:26 AM